သူဌေးဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ – Gentleman Magazine
ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေကို တွေ့ဖူး၊ မြင်ဖူး၊ဆက်ဆံဖူးကြမှာပါ။ အခုခေတ်မှ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေ ကို ပိုက်ဆံရှိသူတွေ၊ အောင်မြင်တဲ့သူတွေ လို့လူတွေက မှတ်ထင်ထားတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်ခြင်း – ကျောင်းတက်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တပျော်တပါးလျှောက်သွားတက်ကြသလို ၊လုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လာတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ သွားလာသောက်စားတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ကတော့ အခြားသူများနှင့် ဆက်ဆံရန်အတွက် ကိုယ့်အလုပ်မှာ ပင်အချိန်မလောက်ဖြစ်ကာ လုပ်ငန်းပြင်ပတွင် အပေါင်းအသင်းထားရန်ပင် အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်။ ကံကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များကတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကြုံ့တွေ့နေရတာတွေ ကို ပြန်လည်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အတွက် စပ်တူလုပ်တူတွေရှိနေတက်ပေမယ့် အများသောအားဖြင့်က တစ်ယောက်ထဲရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရတာများပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျတော့ တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ့်အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ရင်း အထီးကျန်ဆန်လာပါတော့တယ်။
၂။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသည် အလုပ် နှင့် lifestyle ပေးသော်လည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ကိုပေးမည်မဟုတ် – လုပ်ငန်းတစ်ခု စလုပ်လိုက်ရင်ပဲ သူဌေးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ စစလုပ်ချင်း စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အများစုရဲ့ တစ်လစာဝင်ငွေဟာ သာမန်စားသောက်ဆိုင် မန်နေဂျာလခ လောက်တောင်ရှိဖို့နည်းပါသည်။ ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တာဝန်များကတော့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ထက် အစမတန်များနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များဟာ ဘော်ကျော့နေပြီး သူများကို ထိုင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်နေရသူများဖြစ်ပြီး အလွန်ခက်ခဲသော အလုပ်ကိုတာဝန်ယူနေရသူများဖြစ်သည်။
၃။ အောင်မြင်သောလုပ်ငန်း တစ်ခုထူထောင်ရန်အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင် – အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်ရန်လွယ်ပေမယ့် လုပ်ငန်းရဲ့ လွယ်ကူ ခက်ခဲမှုအပေါ်မူတည် ၍ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရရှိရန် . အမြတ်ဝင်ငွေရရှိရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရုံးကန်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရန် နာမည်က အလွန်အရေးကြီးကာ နာမည်ကောင်းကိုရရှိရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို မရောက်မီ လုပ်ငန်းကျရှုံးခြင်းများသည် ဖြစ်နေကျဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။
၄။ လူတွေကို ထိန်းချုပ်ရမည် – ဝန်ထမ်းများသာမက၊ ဖောက်သည်များ ၊ ဒို်င်များနှင့် ပါ ပြောဆုိုဆက်ဆံရမည်ဖြစ်သည်။ သင်က အမြဲတမ်း လူဆိုးနေရာတွင်နေရကာ ပြောစရာရှိသည်ကို လိုရင်းတိုရှင်းပြော၊ အလုပ်ထုတ်ခြင်းများ၊ လူမုန်းမည့်ကိစ္စများကို ဒိုင်ခံဖြေရှင်းရမည်။ လူတွေကို စီမံ ခံ့ခွဲခြင်းအလုပ်သည် လွန်စွာမှ ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်ကာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရည်အချင်းဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည် လုပ်ငန်းရှင်များ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများ အချို့ကို ရွေးချယ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကို်ယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ရန်ကြံစနေသာသူများအနေဖြင့် ထုိုအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်မှသာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ကိုင်သင့်သည်။ လူတိုင်းဆရာဝန်မဖြစ်နိုင်သလို . လူတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်မဖြစ်နိုင်သည်ကို ကြိုတင်သိရှိစေရန် အသိပညာပေးခြင်းသက်သက်ဖြစ်သည်။
လုပျငနျးရှငျဖွဈရခွငျးရဲ့ ဆိုးကြိုး ၄ ခု
ကိုယျပိုငျအလုပျလုပျနတေဲ့ သူတှကေို တှဖေူ့း၊ မွငျဖူး၊ဆကျဆံဖူးကွမှာပါ။ အခုခတျေမှ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးလုပျတဲ့သူတှေ ကို ပိုကျဆံရှိသူတှေ၊ အောငျမွငျတဲ့သူတှေ လို့လူတှကေ မှတျထငျထားတကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဆောငျးပါက လုပျငနျးရှငျတဈယောကျ နစေ့ဉျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲမြားကို ဖျောထုတျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
၁။ တဈယောကျတညျးအထီးကနျြခွငျး – ကြောငျးတကျတုနျးက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တပြျောတပါးလြှောကျသှားတကျကွသလို ၊လုပျငနျးခှငျထဲဝငျလာတော့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ သှားလာသောကျစားတကျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လုပျငနျးရှငျမြားအတှကျကတော့ အခွားသူမြားနှငျ့ ဆကျဆံရနျအတှကျ ကိုယျ့အလုပျမှာ ပငျအခြိနျမလောကျဖွဈကာ လုပျငနျးပွငျပတှငျ အပေါငျးအသငျးထားရနျပငျ အလှနျခကျခဲလာပါတယျ။ ကံကောငျးတဲ့ လုပျငနျးရှငျမြားကတော့ တဈနတေ့ဈနေ့ ကွုံ့တှနေ့ရေတာတှေ ကို ပွနျလညျတိုငျပငျဆှေးနှေးရနျ အတှကျ စပျတူလုပျတူတှရှေိနတေကျပမေယျ့ အမြားသောအားဖွငျ့က တဈယောကျထဲရငျဆိုငျဖွရှေငျးရတာမြားပါတယျ။ နောကျဆုံးကတြော့ တဈယောကျထဲ ကိုယျ့အိပျမကျတှေ အကောငျအထညျဖျောရငျး အထီးကနျြဆနျလာပါတော့တယျ။
၂။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးသညျ အလုပျ နှငျ့ lifestyle ပေးသျောလညျး ခမျြးသာကွှယျဝမှု ကိုပေးမညျမဟုတျ – လုပျငနျးတဈခု စလုပျလိုကျရငျပဲ သူဌေးဖွဈသှားတာမဟုတျပါဘူး။ ဥပမာ စစလုပျခငျြး စားသောကျဆိုငျပိုငျရှငျအမြားစုရဲ့ တဈလစာဝငျငှဟော သာမနျစားသောကျဆိုငျ မနျနဂြောလခ လောကျတောငျရှိဖို့နညျးပါသညျ။ ဒါပမေယျ့ ပိုငျရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ လုပျရတဲ့ အလုပျတာဝနျမြားကတော့ မနျနဂြောတဈယောကျရဲ့တာဝနျထကျ အစမတနျမြားနမှောဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လုပျငနျးရှငျမြားဟာ ဘျောကြော့နပွေီး သူမြားကို ထိုငျခိုငျးနတေယျဆိုတာထကျ ကိုယျကိုယျတိုငျ အလုပျလုပျနရေသူမြားဖွဈပွီး အလှနျခကျခဲသော အလုပျကိုတာဝနျယူနရေသူမြားဖွဈသညျ။
၃။ အောငျမွငျသောလုပျငနျး တဈခုထူထောငျရနျအတှကျ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာမွငျ့နိုငျ – အလုပျတဈခုကိုစတငျရနျလှယျပမေယျ့ လုပျငနျးရဲ့ လှယျကူ ခကျခဲမှုအပျေါမူတညျ ၍ လုပျငနျးအောငျမွငျမှုရရှိရနျ . အမွတျဝငျငှရေရှိရနျ နှဈပေါငျးမြားစှာ ရုံးကနျရနျလိုအပျပါလိမျ့မညျ။ လုပျငနျးတဈခုအောငျမွငျရနျ နာမညျက အလှနျအရေးကွီးကာ နာမညျကောငျးကိုရရှိရနျ နှဈပေါငျးမြားစှာ ယုံကွညျမှုတညျဆောကျရမညျဖွဈသညျ။ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျကို မရောကျမီ လုပျငနျးကရြှုံးခွငျးမြားသညျ ဖွဈနကေဖြွဈစဉျမြားဖွဈသညျ။
၄။ လူတှကေို ထိနျးခြုပျရမညျ – ဝနျထမျးမြားသာမက၊ ဖောကျသညျမြား ၊ ဒျိုငျမြားနှငျ့ ပါ ပွောဆုိုဆကျဆံရမညျဖွဈသညျ။ သငျက အမွဲတမျး လူဆိုးနရောတှငျနရေကာ ပွောစရာရှိသညျကို လိုရငျးတိုရှငျးပွော၊ အလုပျထုတျခွငျးမြား၊ လူမုနျးမညျ့ကိစ်စမြားကို ဒိုငျခံဖွရှေငျးရမညျ။ လူတှကေို စီမံ ခံ့ခှဲခွငျးအလုပျသညျ လှနျစှာမှ ခကျခဲသောအလုပျဖွဈကာ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျမှာ မရှိမဖွဈလိုအပျသော အရညျအခငျြးဖွဈသညျ။
အထကျဖျောပွပါအခကျြအလကျမြားသညျ လုပျငနျးရှငျမြား နစေ့ဉျ ကွုံတှရေ့သော အခကျအခဲမြား အခြို့ကို ရှေးခယျြတငျပွထားခွငျးဖွဈသညျ။ ကျိုယျပိုငျလုပျငနျး လုပျရနျကွံစနသောသူမြားအနဖွေငျ့ ထုိုအခကျအခဲမြားကို ရငျဆိုငျနိုငျရနျ ကွိုတငျပွငျဆငျနိုငျမှသာ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးကို စတငျလုပျကိုငျသငျ့သညျ။ လူတိုငျးဆရာဝနျမဖွဈနိုငျသလို . လူတိုငျးလုပျငနျးရှငျမဖွဈနိုငျသညျကို ကွိုတငျသိရှိစရေနျ အသိပညာပေးခွငျးသကျသကျဖွဈသညျ။
Previous: ဘူကောင်တွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ
Next: လိင်တံ ကြီး/ရှည် အောင်လုပ်လို့ရလား